Baolina Kitra : Hiverina ny adin’ny JapanActuels sy As Adema
Raha ny fandaharam-potoana mbola tsy ofisialy dia mety ny lalaon’ny Japan Actuel’s sy ny As Adema sy ny Fihaonan’ny Tana Formation FC sy ny Ajesaia no hanokatra ny taom-pilalaovana 2012 ho an’ny ligin’Analamanga eo amin’ny baolina kitra (Alfa).
Hotontosaina etsy amin’ny kianjan’i Mahamasina izany amin’ny 28 janoary ho avy izao raha ny 29 janoary kosa ny lanonam-panokafana ny taom-pilalaovana, ho an’ity ligy ity. « Miankina amin’ny fivoriana fanomanana izay hotontosaina amin’ny talata ho avy izao izany », hoy i Henintsoa Rakotoarimanana, filohan’ny ligy Alfa.
Isan’ny mahakasika azy ireo hampihaona voalohany ny Japan Actuel’s main’ny As Adema, araka ny fantatra, ny fihaonana izay niseho farany tany Mahajanga ary niteraka savorovoro teo amin’ireo ekipa roa ireo. Etsy an-danin’izany ihany koa ny fisoloan’ny Japan Actuel’s any Madagasikara amin’ny tompon-dakan’i Afrika ka alaina ny lalao tsapa ho azy koa ny an’ny Tana Formation FC sy ny Ajesaia, izay hitsapana an’iry ekipan’Andoharanofotsy iry, mialoha ny hisoloany tena an’i Madagasikara amin’ny fiadiana ny amboaran’ny kaon-federasiona Afrikanina ho an’ny baoli na kitra, amin’ity taona ity.
Ankoatra izany dia noferan’ny ligin’Analamanga hatrany ny 24 janoary ho avy izao ny fara-fandraisana ny fifindran’ireo mpilalao sy ny firaiketana farany ny kara-pilalaovana. Amin’io daty io ihany koa no hifaranan’ny fandraisana vola avy any amin’ireo klioba 10 hiatrika ny lalao mandroso sy miverina amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’Analamanga diviziona voalohany.